ညီလင်းသစ်: ကျွန်းကလေးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ (၃)
Posted by ညီလင်းသစ် au 25.3.13
I m afraid to read no.3.
ဟိုတုန်းက တနဂ်နွေ တခါပြန်ပြီးရဖို့အရေး...
လာမယ့် တနင်္ဂနွေ တစ်ရာနဲ့ လဲ မလေ... (((ဟမ်)))
စောစောစီးစီး လာဖတ်ပြီး ကော်မန့်ရေးမယ်ကြံတော့ ရှေ့က သီချင်းတွေ့တာနဲ့ မနေနိုင်ပဲ ဆိုလိုက်မိဒလယ်... :P
အခုတော့ ကျွန်မ သိပြီ... မုန့်ဟင်းခါး စားရင်း ကိုညီလင်း ငြိမ်သွားတာ ဆွေတွေ မျိုးတွေနာမည် စဉ်းစားနေတာမှန်း သိသွားပြီ... မာရဇ္ဇ သီချင်းအကြောင်းတော့ တို့ မစဉ်းစားချင်ပါဘူး... လွမ်းစရာလေးတွေ ဖြစ်ကုန်လို့ပါ... အဟိ...
တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာ အချိန်တိုလေးပေမယ့် အမှတ်တရပါ ကိုညီလင်းရေ... နောက်လည်း တွေ့ကြအုံးမယ်နော်...း-)
ကျွန်းကလေးရဲ့ ရင်ခွင် (၃)မျှော်နေတုံး ပို့စ် အသစ်တက်လာတော့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေနဲ့ ခင်ခင်မင်မင် တွေ့ဆုံကြပြီး စာပေ ဟောပြောပွဲတောင် နားထောင်ခွင့် ရလိုက်တဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ကို အားကျသွားတယ်။အမမှာ off မရလို့ စာပေဟောပြောပွဲနဲ့ လွဲရတာ အကြိမ်ကြိမ်။ရုပ်ရှင်တွေထက် စာပေဟောပြောပွဲတွေကို ပိုနှစ်သက်ခဲ့တာ ဟိုး ကလေးဘ၀ထဲက။ခုလည်း စာတွေကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ဖတ်တုံး။ဖတ်လို့ မ၀ဘူး။အပိုင်း (၄) မျှော်နေပါမည့်အကြောင်း။ ခင်မင်စွာဖြင့်- အစ်မ နော်နော်
ရောက်တုန်းပေါက်တုန်း မေင်နှမတွေနဲ့လဲ တွေ့ခွင့်ကြုံ၊ စာပေဟောပြောပွဲပါ ရောက်ဖြစ်သွားတာ.. တယ် မနာလိုချင်စရာကြီး ကိုညီရေ.. ဒိုးကန်ရဲ့ မုန့်လင်မယားလေးက အနံ့လေးတောင်
မွှေးလာသလိုပဲ.. ဆွေမျိုးမေ့တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးလေးကလည်း အတော့်ကိုကောင်းမယ့်ပုံ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်..အရပ်မြင့်မြင့်သီချင်းကတော့ ကွက်တိပဲ။ မချစ်ရဲ့ ကိုပန်းသီးက အင်မတန် ခင်စရာကောင်းတယ် (ကိုယ်တွေ့) ။ ဗီဇာမလို၊ လေယာဉ်ခမကုန်ပဲ ကိုယ်တိုင် စလုံး ရောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ အပိုင်း(၄)ကို စိတ်စောစွာဖြင့်...
ပထမဦးဆုံး အကြိမ်တွေ့တာဖြစ်ပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သူရယ်လို့ ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာ ဘလော့ဂါတိုင်းရဲ့ တူညီတဲ့ခံစားချက်တစ်ခု ထင်ပါရဲ့ မောင်ညီလင်းရေ… ဘလော့ဂါတစ်ဦးချင်းရဲ့ အကြောင်းကို တစ်လေးတစ်စား ဖေါ်ညွှန်းထားတာ မြင်ရလေတော့ ပို့စ်တင်တိုင်း စိတ်ဝင်စားလောက်အောင် စံနစ်တကျလေး စီစီရီရီ တင်တတ်မှန်းသိနေပေမယ့် မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ မသန္တာဟင်းချက်ကောင်းတာ၊ မဒိုးရဲ့ မုန့်လင်မယား လက်ရာ၊ မသက်တို့ ဇနီးမောင်နှံ၊ ပြီးတော့ မချစ်နဲ့ ကိုဝင်းနိုင် သူတို့လေးတွေရဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေလွန်းတာတွေကိုတော့ တီတင့်လည်း အမြဲသတိတရ ရှိနေဆဲပေါ့ကွယ်… မောင်ညီလင်းသာ အချိန်ဒီထက်ပိုပေးနိုင်ရင် သဘောကောင်း မနောကောင်း ဘလော့ဂါတွေ တစ်လှေကြီးရှိသေးပါ့ စာပေဟောပြောပွဲအတွေ့အကြုံလေး အသေးစိတ် ထပ်ဆင့်မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ အပိုင်း-၄ ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာစွာနဲ့စောင့်နေမယ်း)
အလှတရားက ကြည့်သူအပေါ်မှာမူတည် တယ်ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ..
မြင်တဲ့အတိုင်း ရေးတတ်တော့လည်း အားလုံးဟာ လှပ နေပါရောလား..
တစ်ခါတည်းနဲ့ အများကြီးဆုံရတာကောင်းတာပေါ့ အားကျစရာကြီးး တစ်ချက်ပစ် အုပ်လိုက်ထိပေါ့ ဦးလေးကြီး ငှက်ပစ်တော်တယ်း)
ဒါနဲ့ လုံချည်ကြီး နဲ့ ညီ ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတယ် သိများသိနေမလား ။
အဲဗားဂရင်းဖြိုး နဲ့ ဆုံဖူးချင်တယ်။
အညာသူချက်တဲ့ ပဲများများ မွင်းငါးကို အချိန်ပေးလာစားတာကို ကျေးဇူးတင်မဆုံးပါဘူး ။ နောက်တခေါက်ချက်ကျွေးချင်ပါသေးတယ်..:D
မုန့်ဟင်းခါးစားပြီး ဆွေမျိုးတွေကို မေ့သွားတဲ့အကြောင်း ရေးထားတာကို အရမ်းသဘောကျနေတာ :D ရေးလည်းရေးတတ်တယ်။
အစ်ကိုရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ရတာ တခါတခါကျရင် အသက်ရှူဖို့မေ့နေတတ်တယ် မျောသွားလို့လေ....ပြီးတော့ချစ်ခင်ရတဲ့ ဘလော့ဂါအစ်ကိုအစ်မတွေအပေါ်မှာ မြင်တဲ့ အမြင်ကိုဖော်ညွှန်းထားတာ မမြင်ဖူးတဲ့ သူတွေကိုတောင် မြင်ဖူးသလိုဖြစ်စေတယ်...။ အိုခေ...နောက်တစ်ပို့စ် အပြင်လိုက်လည်မယ်...။
I m ur silent reader..
ur posts are great!
love all ur posts...
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် လာမန့်ခြင်း အကိုရေ..။
ရုံးမှာ အလုပ်တစ်ဘက်နဲ့ စိတ်က မဖြောင့်...အပေါ်ထပ်တက်သွားရလိုက်....ကိုယ့် ခုံကလေး ပြန်ရောက်လာ..တစ်ပိုဒ်ဖတ်လိုက်နဲ့.။
အားပါးတရလည်း မန့်ပြီးရော..blogger မှာ sign in ၀င်မထားပဲ ရုံးအီးမေးလ်ဖွင့်ထားမိတာ မေ့ပြီး ချာလပတ်ရမ်းကုန်ရော..။
အဲဒါနဲ့ မန့်ထားတာတွေ ပျောက်ကရော..။
ရင်ခုန်သံတောင် အနည်းငယ်ကျွတ်ကျဲ သွားတယ်..အဟဲ :D ။
မုန့်ဟင်းခါးကောင်းပုံကို ရေးထားတာ တကယ်သဘောကျတယ်..။
ပထမ တကယ်မေ့နေတာ မှတ်လို့ ဘာများဖြစ်လဲလို့...တော်တယ်ကွာ..ရေးချက်က..။
အကို ရေးတာဖတ်နေရင်း ကိုယ်တိုင်ပါ သူတို့တွေနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျတွေ့နေရသလို ခံစားမိတယ်..။
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနဲ့ မျောပါအသွားဆုံးက စာပေဟောပြောပွဲပဲ..။ ကြံကြံဖန်ဖန်တိုက်ဆိုင်ကြုံကြိုက်တဲ့ အကို့အတွက် တကယ် အမှတ်တရပဲနော်..။
နောက် ဆရာမြင့်မောင်ကျော် ပြတဲ့ slide တွေ တကယ်ကြည့်ချင်တယ်...ရှိုက်သံအနည်းငယ်တစွန်းတစထွက်ပေါ်လောက်ရတဲ့ အနုပညာကို တကယ်ခံစားကြည့်ချင်တယ်ဗျာ..။
ဒါနဲ့..ဓာတ်ပုံတွေမှာ အကို နာမည်ရေးထိုးထားပုံကလေး တကယ် သဘောကျတယ်..။
ဆရာမသန်းမြင့်အောင် ပုံမှာဆို ဟို ဟောပြောတဲ့ ဘာလေးခေါ်လဲ..ခုံလေး ဆိုပါတော့ အဲဒါနဲ့ ကွက်တိပဲ...။
တွေ့ကြုံ ဆုံတွေ့ရတဲ့ ချစ်စရာမြင်ကွင်းလေးကို ပုံပေါ်အောင်ရေးသွားတာ အရမ်းသဘောကျတယ်..။
အပိုင်း (၄) ကို ဆက်လိုက်ခဲ့ပြီကွယ်.. :)) ။
ဗမာပီပီ မုန့်ဟင်းခါး ဆိုတာကို အသံကြားတဲ့အခါ… ဓါတ်ပုံမြင်တဲ့အခါ… ချက်ချင်းစားချင်စိတ်ဖြစ်မိတာတွေ အကြိမ်ကြိမ် ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်…
ဟားးးးးးး…ကိုညီ့ရဲ့ မုန့်ဟင်းခါး အဖွဲ့ မှာ ဘာကိုပြောချင်တာပါလိမ့် ဆိုပြီး မျောသွားလိုက်တာ… (ကိုညီ့ အမျိုးတယောက်ယောက်ရဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ဇာတ်လမ်းများလား ဆိုပြီး ဖတ်နေရင်းကို ထင်မိသေးတယ်…) အဆုံး အရောက်မှာ “ဟာ” ကနဲ ဘဲ…
ကိုညီ့ အရေးအဖွဲ့ကတော့ဗျာ…တော်ချက် 
အော် ..................ကိုညီလင်း...ကိုညီလင်း (ဆွဲဆွဲငင်ငင်ဖြင်.)
တခါမှမမြင်ဖူး၊မဆုံဖူးကြတဲ. သူစိမ်းတွေကိုတောင် ကြွေကျသွားအောင်ရေးတတ်၊ပြောတတ်တာ၊ မအိမ်သူကို သူဘယ်သို.ဘယ်ပုံ ပြောခဲ.ပါလိမ်.နော် .......
စာပေချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်းကလေးပေါ်အရောက် စာပေဟောပြောပွဲနဲ့တိုးတာတော့ ၀မ်းသာစရာပဲ အစ်ကိုရေ ...
ဆရာမောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ရဲ့ “ဒေါင်းတို့ရဲ့စောင်း”ကိုတော့ ရန်ကုန်က ဝေဇယန္တာ Orange Supermarket မှာ ဟောပြောတုန်းက နားထောင်ဖူးတယ် ... ဟုတ်တယ် အစ်ကို ... အဲဒီထဲက ဆရာရွတ်ပြတဲ့ ကဗျာလေးတွေက အရမ်းကိုကောင်းတယ်နော် ... တစ်ချို့ကဗျာတွေဆို ကြက်သီးများတောင်ထမိတယ် ... ကဗျာရှည်တော့ မကြားဖူးသေးဘူး ... ဆရာ့ရဲ့ကဗျာရှည်ကိုတော့ ဖတ်ချင်လိုက်ပါဘိ အစ်ကိုရေ ... :)
ပျော်စရာကြီးနော် စာလိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် အလိုလို ကြည်နူးလာမိတယ်၊၊ စာပေဟောပြောပွဲ တစ်ခါမှ နားမထောင်ဖူးဘူး၊၊ ဒီတစ်ခေါက်အိမ်ပြန်ရင် တစ်ပွဲလောက်တော့ နားထောင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်၊၊
ရင်ခုန်သံအပိုင်း4ကိုလည်း
No need to scare lah! :) တိမ်ပြာပြာနေ့တစ်နေ့ ဆန်းဒေးမှာကွယ်..း)
တစ်ရာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ သူ့အနောက်က ယူနစ်က ဘာတုန်း?း) အဲ.. မုန့်ဟင်းခါးစားရင်း ငြိမ်နေမိတာက အစ်မသက်ဝေ အရှေ့က မန္တလေးပဲကြော် ပန်းကန်ကို ဘယ်လိုများ တောင်းရင် ကောင်းမလဲလို့ စကားလုံး ရှာနေတာ အစ်မရဲ့..၊းD
မချက်ဖြစ်သေးပါဘူး ညီမရာ..၊ လောလောဆယ် မုန့်လင်မယားပဲ လုပ်စားရမလား စဉ်းစားနေတာ...၊း)
ဟော.. off မရဘူးဆိုတော့ ပွဲတွေက နီးရက်နဲ့ ဝေးနေတာပေါ့၊ နောက်တစ်ကြိမ်မှာတော့ အဆင်ပြေပါစေဗျာ၊ ပုံမှန်လာဖတ် နေတာကိုလည်း ကျေးဇူးပါလို့...၊
ဟုတ်တယ် အစ်မရဲ့၊ ကျနော့်အဖြစ်က ပြည်သူ့ဆိုင်မှာ ဆပ်ပြာသွားထုတ်တဲ့ နေ့မှာမှ သကြားပါ ပေးနေတာနဲ့ ကြုံလိုက်တဲ့ သမဝါယမခေတ်က အိမ်ရှင်မ လိုပါပဲ၊း) အဲဒါကိုပဲ ပြန်တွေးတိုင်း ဝမ်းသာနေရတာ..၊း)
ဟုတ်ကဲ့ တီတင့်..၊ ကျနော်လည်း အဲဒီ တစ်လှေကြီး ရှိနေသေးတဲ့ သဘောကောင်း၊ မနောကောင်း ဘလော့ဂါတွေကို အခွင့်ရရင် ဆုံချင်ပါသေးတယ်၊ ဟိုတစ်ခါ တီတင့်အိမ်မှာ တပြုံတမကြီး ဆုံတွေ့ ကြတာကိုကြည့်ပြီး အားကျနေတာ...၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ တကယ်ဆို အဲဒီအလှတရားတွေကို ဒီ့ထက်ကြာကြာ အချိန်ပိုပေးပြီး ကြည့်ခဲ့ရမှာ..၊း) စာပေဟောပြောပွဲနဲ့ တိုက်နေလို့ အပြေးအလွှား ဖြစ်သွားတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံခဲ့ရတာ ဝမ်းသာစရာပါ..၊
ဘယ့်နှယ်.. ဦးလေးကြီး ဖြစ်သွားရပြန်တာတုန်း..၊း) အဲ့ဒီထဲ အဝေးက ဖုန်းလှမ်းဆက်တဲ့ ငှက်ကလေး တစ်ကောင်တောင် ပါသေးတယ်၊ ညီက ̔ညီ့̕ ကို သိနေမယ် ထင်လို့လား...၊း)
ကျနော်ကလည်း အခုလို ဖိတ်ကျွေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ၊ အကြာကြီး မနေနိုင်ခဲ့တာကိုပဲ စိတ်မကောင်းတာ..၊ နောက်တစ်ခါ ကြုံရင်လည်း စားချင်ပါသေးတယ်၊ အဲ.. ဒီတစ်ခါ ဆိုရင်တော့ မစားခင်မှာ အမျိုးတွေရဲ့ နာမည်တွေကို စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေးပြီး မှတ်ထားမှပဲ ဖြစ်တော့မယ်..၊းD
ဟုတ်တယ်ဗျာ.. အဖြစ်က အဲဒီလို၊း) အဲ.. တစ်ခုပဲ၊ ဒီစာကို အမေ့ခံ ဆွေမျိုးတွေ လာမဖတ်မိဖို့တော့ လိုမယ်ဗျ...၊း)
အာ.. အဲဒီလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ညီမရာ..၊ တော်ကြာ ဂူးဂဲလ်ရဲ့ ဘလော့စပေါ့က ကျနော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဘလော့ဂ်စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်နေပါ ဦးမယ်..၊း) အပြင်လည်း လိုက်ခဲ့ပါ ညီမရေ..၊
Thank you for your encouragement! It makes me keep moving. :) And... thanks also for leaving this comment despiteasilent reader. :)
ကျေးဇူး ကိုညိမ်းရေ...၊ ကဲ.. ကိုညိမ်းကတော့ ပြောရော့မယ်၊ ဒီ့ထက် ဧည့်ဝတ်ကျေတာ ရှိပါအုံးမလားဗျာ၊း)
ခဲရာခဲဆစ် အခြေအနေတွေ ကြားကနေ အခုလို ဒုတိယအကြိမ်တောင် ထပ်လာပြီး ကွန်မန့်ပေးတာ အတွက် တကယ့်ကိုပဲ ကျေးဇူးပါ ညီမရေ..၊ ကျနော်လည်း အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်ဖူးလို့ နောက်ဆို ကွန်မန့်ရေးတာ ရှည်သွားပြီဆို publish မလုပ်ခင်မှာ word ပေါ်မှာ ကော်ပီအရင်ကူးထား ရတယ်၊ တခါတလေ log-in ဝင်ထားတာတောင်မှ error နဲ့ တိုးတတ်သေးတာ ကလား၊း) နာမည်ထိုးပုံ အသေးစိတ်လေးကအစ အချက်တော်တော်များများကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင် ဖတ်သွားတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်နော်...၊
ဟုတ်တယ်နော်..၊ မုန့်ဟင်းခါးကတော့ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာရောက်ရောက်.. ဘယ်တော့မှ စားလို့ မဝဘူး၊ ချစ်စရာ ကွန်မန့်လေးအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါဗျာ...၊း)
ဟားဟားဟား... ဖြန့်ထွက်တွေးခြင်းဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာဖြစ်ရမယ်၊းD အင်း... အချိန်စီးကြောင်းရဲ့ တိုက်စားမှုထဲ မျောပါသွားလို့ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ပြောခဲ့တယ် ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ပါဘူးဗျာ၊း) (ရီရီဝေဝေဖြင့်...)း)
ဟုတ်တယ် ညီမရေ..၊ ဆရာ့ရဲ့ ကဗျာရွတ်တဲ့ ဟန်နဲ့ အသံက အတော်လေး နားထောင်လို့ ကောင်းတယ်နော်၊ ဒါတောင် အချိန်မလောက်လို့ အဆုံးထိ နားမထောင်ခဲ့ရဘူး...၊
သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပေါ့ဗျာ..၊ ကြုံကြိုက်လို့ကတော့ တကယ်ကို နားထောင်သင့်ပါတယ်..၊
ဟုတ်ပါတယ် ညီမရေ၊ ရင်ဘတ်တူကြသူတွေ အချင်းချင်းဆိုတော့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရတာ တကယ်ပဲ ပျော်စရာ..၊
ဟုတ်ကဲ့...၊ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် အစ်မရေ...၊
အကိုစာဖတ်နေရင်းကို ပျော်နေမိတယ် ဘာကြောင့်ပါ့လိမ့် ကိုယ်တိုင်းတွေ့ နေရသလိုလိုနဲ့ ..အကိုကပဲစာရေးကောင်းလို့ ထင်တယ် မျက်စိထဲကိုမြင်မိတယ်..:) အပိုင်း၎ ကိုမျှော်နေပါကြောင်း
ဆွေမျိုးမေ့တဲ့ မုန့် ဟင်းခါးကို စိတ်ဝင်စားသွားပြီဟဲဟဲ မမြင်ဘူးတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို အစ်ကိုရေးတဲ့စာတွေ ကနေ တဆင့်မြင်ဘူးသွားပြီ မနေ့ ကတည်းက မန့် မလို့ ပါဆိုမှ စူပါ ကွန်နက်ရှင်နဲ့ တိုးနေလို့ 
တနင်္လာနေ့ တိုင်း အလုပ်မှာ ပျင်းရိငြိငွေ့ တတ်ပေမယ့် ကိုညီ့ ဘလော့လေးမှာ ပို့ စ်အသစ်တင်တတ်လို့ ရုံးရောက်ရင် မြန်မြန်လာကြည့်ဖို့စိတ်စောနေတတ်ပါတယ်..။။
အသစ်လေးမြင်ရင် စိတ်ကျေနပ်။။ ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လာလာဖတ်ပေါ့..။။
ဒီတစ်ခါလည်း ကော်မန့် ကို တစ်ကြိမ်ထပ်ရောက်လာပြီး ရေးဖြစ်ပြန်ပါပြီ..။။
မုန့် ဟင်းခါးနဲ့မုန့် လင်မယားက အလွန်ကြိုက်သော မြန်မာမုန့် တွေပါပဲ..။။
မှတ်မှတ်ရရ စာပေဟောပြောပွဲကို ဆရာမဂျူးတစ်ယောက်ပဲ နားထောင်ဖူးတယ်...။။
ကိုညီရေ...အပြင်ဖက်ကို လျှောက်လည်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ...။။း))
စလုံးက ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေနဲ့တပျော်တပါးဆုံရတာ ပျော်စရာကြီး..စာပေဟောပြောပွဲ တခါမှ နားမထောင်ဘူးလို့အားကျလိုက်တာ..အပိုင်း ၄ မျှော်နေမယ် ကိုညီ..ဟန်ဒါဆန်ဝေ့တံတား၊ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် ရောက်ခဲ့လား ကိုညီ...
ဘလော့ဂါတွေနဲ့ တွေ့ ခဲ့တယ်ဆုိုတော့ပိုလို့ စိတ်ဝင်စားမိတာတော့အမှန်ပါ။
ကုိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ မြင်ကြည့်ထားတာလေးတွေနဲ့ တုိုက်ဆုိုင်မလားလို့ လည်းတိတ်တိတ်လေးတွေးပြီး နှိင်းယှဉ်ကြည့်နေမိတယ်။
ကိုညီလင်းသစ်ရေ မချစ်က ဖုန်းထဲကနေတော့ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ခုမှပဲ လာမန့်ရတာပါ။ တွေ့ဆုံခွင့်အတွက် မချစ်တို့ ကျွန်းသားတွေကလည်း ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ သီချင်းကိုတော့ နောက်တစ်ခေါက်ကျမှပဲ live ဆိုပြပါတော့မယ် နော်း))
တို့လဲအဲသလို ခပ်ပြေပြေလေးထိုင်ပြလိုက်ပါရဲ့ ဖွဲ့မယ်မှန်းသိရင်.